Dowladda Federaalka ayaa Boqolaal Shacab reer Gedo ah ku Xayirtay Muqdisho - Awdinle Online
Dowladda Federaalka ayaa Boqolaal Shacab reer Gedo ah ku Xayirtay Muqdisho
February 20, 2020 (Awdinle Online) – Boqolaal ka mid ah shacabka gobalka Gedo ayaa ku xayiran magaalada Muqdisho, kuwaas oo Muqdisho usoo doontay Caafimaad iyo adeegyo kale.
Shaqsiyaad ka mid ah bulshada halkaan ku xayiran oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo diiday in ay dib ugu laabtaan degaankooda, waxayna sababta ku sheegeen in uu sameeyay khilaafka dowladda federaalka iyo Jubaland u dhaxeeyo
Nabadoon Maxamed Aadan Xasan, oo ka tirsan wax-garadka gobalka Gedo ayaa sheegay in isaga iyo boqolaal kale oo ka yimid Gedo ay shirkadaha duulimaadka u sheegeen in aysan celin karin ayna tahay amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
“Aniga waxaan Muqdisho u imid caafimaad, waxaana isla joognaa dad kale oo ay ku jiraan dumar fool loo keenay iyo kuwa kale oo xanuunsan, dhamaanteen waan weynay diyaarad aan raacno waxaana naga joojisay dowladda,” ayuu yiri Nabadoon Maxamed Aadan.
“Waxaan dalbaneynaa in dowladda noo ogolaato in aan dib ugu laabano degaankayna, sababtoo ah siyaasad kuma jirno, waxaa ka soo taganay Xoolo iyo beero, waxbaa naga dayacan,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay nabadoon Maxamed Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta.
Dowladda Soomaaliya ayaa gobalka Gedo ku soo rogtay cuna-qabatayn dhanka duulimaadka ah, waxaana hore looga joojiyay diyaarad ay saarnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobalka laga soo doortay.
Previous articleSafiirka Soomaaliya ee Sudan iyo ku-xigeenkiisa oo isku Dilay Gudaha Safaaradda
Next articleWar deg deg:- Taliyaha Ciidanka Xoogga oo qoray Warqad Iscasilaad ah